FAQs - Jiangxi Kaishun Iimpahla IMP & Exp Co., Ltd.
Isangqa sentamo ejikeleze intambo
Ihempe ezijikelezileyo zehempe
NGABA uyamkela uyilo lomthengi kunye nelaphu?
Ewe, zombini ubungakanani kunye nombala zinokwenza isicelo somthengi, iilogo zesiko kunye namagama ngamanye, iinombolo zinokongezwa njengoko zifuna, kufuneka usithumelele iLogo okanye uyilo lwakho kwifomathi yePDF okanye yeAI, okanye usixelele izicelo zakho ezineenkcukacha. Abaqulunqi bethu abaziingcali baya kunika esona sisombululo sisiso kuwe.
Njani ukulawula umgangatho?
Imfashini ihlala iphambili. Imfashini ihlala inamathisela kubaluleke kakhulu kulawulo lomgangatho ukusuka kwasekuqaleni ukuya esiphelweni. Umzi-mveliso wethu umisele i-QC yokujonga ukujonga umgangatho ngamnye kuwo onke amanyathelo.
Ndingazifumana njani iisampulu?
Kulilungelo kuthi ukukunika iisampulu.
1), Ukuba sinesampulu esitokisini, siya kukubonelela, usinike nje i-Express A / C yakho yeNombolo.
2), ukuba asinayo esitokweni, siya kukwenzela yona, kuya kufuneka uhlawule umrhumo wesampula kunye nemithwalo, nangona kunjalo intlawulo yesampulu iya kukuhlawula kwiodolo ezizayo.
Ndingalufumana nini iisampulu okanye iimveliso?
1) Isampulu: Ngokubanzi isampulu iya kuthatha i-7-10days ukuvelisa emva kokuba uyilo luqinisekisiwe.
2) Uku-odola ngobuninzi: Emva koku-odolwa kuqinisekisiwe, kuya kuthunyelwa kumzi-mveliso kwaye baya kucwangcisa umhla wokuqalisa ngokwenani lakho. Wakuba uqinisekisiwe umhla, malunga neentsuku zokusebenza ezingama-30 zokuvelisa. inyathelo ngalinye siza kukubonisa imifanekiso kunye nenkqubo yemveliso.
Yeyiphi imiqathango yentlawulo ongayamkela?
Samkela L / C kwi emehlweni, T / T okanye Western Union.
Idilesi:Ilali yaseHufang, isixeko saseNancahng, kwiphondo laseJiangxi, China
Hoodie engenanto, IiHoodies Unisex, Plain Hoodie, Uboya Hoodie, Ukuprintwa kweHood Hoodie, Hoodie yesiNtu,